किन चीनका महिलाले खुवाइरहेछन् आफ्ना श्रीमान्‌लाई नपुंसक बनाउने औषधी ? - Pardeshi Khabar
बैशाख १५,काठमाडौं । चीनमा श्रीमान्‌को धोकाबाट बच्नका लागि महिलाले नयाँ तरिकाको खोजी गरेका छन् । यस्तो तरिका जसबारे थाहा पाउँदा हरेक व्यक्ति जिल खान्छन् । पार्टनरले आफूलाई धोका नदिउन् र अन्य महिलासँग नसल्किउन् भनेर महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई औषधी खुवाइरहेका छन् । यो कुनै साधारण औषधी होइन, पुरुषलाई नपुंसक बनाउने औषधी हो ।
ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार चीनमा श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्‌लाई गोप्य तरिकाले यस्तो औषधी खुवाइरहेका छन् जसका कारण उनीहरु नपुंसकताको शिकार हुने गर्छन् ।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एक लेखमार्फत् केही चिनियाँ श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्‌लाई गोप्य तरिकाले डायगाइलस्टीलबेस्ट्रोल खुवाइरहेको पत्ता लागेको छ । जानकारीमा उल्लेख भए अनुसार यो औषधी एक प्रकारको सिन्थेटिक एस्ट्रोजन हो जसले पुरुषलाई इरेक्सनबाट रोक्ने गर्छ । चीनमा हालै यस्ता किस्सा कहानी सोसल मिडियामा निकै भायरल भएका छन् ।
विच्याटमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार केही महिलाले अनलाइनमार्फत् औषधी अर्डर गरेको र गोप्य तरिकाले खानामा वा पेय पदार्थमा मिसाएर आफ्ना श्रीमान्‌लाई दिने गरेका छन् । यो औषधी खाएपछि केही धोकेबाज श्रीमान्‌ले आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिन बन्द गरेको पनि बताइन्छ ।
यस्तै चीनका कानूनी विशेषज्ञले यो क्रममा यदि श्रीमानलाई कुनै शारीरिक हानी भएको अवस्थामा यस्ता श्रीमतीले आपराधिक कानूनको सामना गर्न पनि तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै यस्तो प्रकारको औषधी बेच्नेहरुले पनि कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँसम्म कि उनीहरुको लाइसेन्स सम्बन्धि लाइसेन्स पनि रद्द गर्न सकिन्छ । एजेन्सी
« ‘विप्लव’ समूहका मुद्दा संविधान र कानूनले मिल्ने मात्र फिर्ता हुने: महान्यायाधिवक्ता बडाल (Previous News)
(Next News) काठमाण्डौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु : निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ ? के पाइँदैन ? »